Global Voices teny Malagasy » Any Amin’ireo Angovo Azo Havaozina Ny ilan’ny Mason’i Kyrgyzstan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Avrily 2016 14:31 GMT 1	 · Mpanoratra Zhenya Tsoy Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kyrgyzstan, Fampandrosoana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Vaovao Tsara
Maodely iray amin'ny fanodinana rivotra amperinasa iray novokarin'i Emil Tursunov. Tahirin-tsariny manokana. Nampiasaina nahazoana alalana
Manetsiketsika ny fitomboan'ireo fampiasàna ny angovo azo havaozina sy ny fandaniana mifanaraka amin'izany ny tsy fahampiana angovo  ao Kyrgyzstan, saingy tsy ho vetivety ny fahazoana fiovàna.
Matetika tohanan'ireo fikambanana iraisam-pirenena, indraindray mianto-tena, manomboka manodina ireo tetikasa sasantsany amin'ny fampiasàna ny fanodinana rivotra, herin'ny masoandro ary ny rano avokoa, ireo orinasa sy ireo olon-tsotra eo an-toerana.
Fanodinan-drivotra iray tsy toy ireo hafa
Emil Tursunov no ilay mpamorona feno fireherehana nanao ny fanodinan-drivotra feno famoronana hita amin'ny sary ery amin'ny fanombohan'ity lahatsoratra ity.
Mazava ireo tombontsoa omeny: tsotra ny fanamboarana sy ny fananganana azy, ny fanetsehana, tsy mandany vola amin'ny fampiasana azy sady afaka ampiasaina amin'ireo hafainganana roa avo sy iva entin'ny rivotra.
Miantoka ny fanodinana ny angovo ilaina tsara sy mahomby ny fahafahana mampifanaraka amin'ireo fepetra samihafa takian'ny toetrandro sy ny fampidirana ireo takelaka mandeha amin'ny herin'ny masoandro.
Manodidina ny telo taona eo ny faharetan'ny famerenam-bola – fotoana azo heverina ho fohy nateraky ny fahakelezan'ny fandaniana tamin'ny fanamboarana (1.000 ka hatramin'ny -2.000 dolara arakarak'ireo habetsahan'ny vokatra ilaina) – raha toa ny fanodinan-drivotra ampy tsara hamokatra angovo ho an'ireo fitaovana mandeha herinaratra fampiasa an-tokantrano no sady mamokatra herinaratra ary manome hafanana ho an'ireo efitrano kely.
Nialohan'ny eritreritra hikisaka ho amin'ny drafitra iray hamokatra ho an'ny daholobe, nihevitra ny hampiseho ilay modely mandritry ny EXPO-2017 i Tursunov, fampirantiana iraisam-pirenena iray misy lohahevitra hoe “angovo n'ny hoavy” any Kazakhstan mpifanila vodirindrina aminy.
Mijanona ho tsy mbola voatrandraka tsara ao Kyrgyzstan ny angovo avy amin'ny fanodinana rivotra, na dia afaka manome hatramin'ny 7%-n'ireo filàna angovo any amin'ireo fiarahamonina eny ambanivohitra izay misy ny antsasaky ny mponina manontolo ao amin'ny firenena aza izany.
Kanefa mitombo ny lazan'ny rivotra, indrindra indrindra any amin'ny faritra avaratra, raha ny famokarana herinaratra ho amin'ny fandaniana ao an-tokantrano na ny fanodinana ireo fisintonan-drano ho an'ny torana fiompiana
Vao haingana ny media eo an-toerana Kloop.kg no nandrakotra ny tantaran'ny olona iray hafa mpitondra fanavaozana teny ambanivohitra, Beshenbei Saadabaev, izay namorona milina iray mora kokoa, tsotra, taorian'ireo taona maro nahafatesan'ny herinaratra tao an-tanànany.
Angovo mahomby ho an'ny trano fianarana mahazo tombony avy amin'ny fitokanany sy angovo avy amin'ny masoandro
Vatoaratra fahanan'ny herin'ny masoandro eo ambony tafon'ny sekoly ao Ak-Tilek. Sary an'ny BIOM 
Raha nampiditra ireo fanovàna mikasika ny ora fampianarana ny governemanta, nanitatra ny fialantsasatra mandritra ny fotoanan'ny ririnina mba hampihenana ny fandaniana mikasika ny fanafanàna, sekoly iray nanaovana andrana tao amin'ny faritra atsimon'i Kyrgyzstan no naka fomba fijery hafa mikasika ny fitsitsiana angovo.
Nandritra ny efatra taona farany teo, ny sekoly mitondra ny laharana No. 52 no nahazo tombony avy amin'ny drafitrasan'ny angovo ahazoana be sy avy amin'ny vatoaratra fahanan'ny herin'ny masoandro teo ambony tafony.
Ireo vatoaratra, na lafo aza, dia misy lanjany lehibe eo amin'ny fampihenana ny lazambidy mikasika ny filàn'ny sekoly.
Ilaina mba hamanàna rano any amin'ny trano fahandroana sakafo ho an'ny mpianatra, any amin'ny trano fandroana, ary any amin'ireo trano fanaovana fanatanjahan-tena, ny angovo avy amin'ny herin'ny masoandro.
Nandritra ny fivoriana niaraka tamin'ireo mpiasam-panjakana, nohazavain'i Elena Rodina, tompon'andraikitra iray ao amin'ny Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana Momba Ny Fampandrosoana misahana drafitrasa lasitra ho fanatsaràna ireo Tranobe Mampiasa Angovo araka ny tokony ho izy , tamin'izany fotoana izany, fa:
Nandritra ny fotoana fanafanàna tamin'ny taona 2012-2013, 600.000 soms [manakaiky ny 8.000 Dolara] no lanin'ny sekoly, raha toa ireo sekoly mifandraika aminy nandany vola manodidina ny 2.500.000 [manakaiky ny 33.600 Dolara], ary nahavita nampidina ihany koa hatramin'ny 53% ny fampiasana angovo.
Ireo fanavaozana ireo dia antenaina hamerina ny fampiasam-bolany voalohany ao anatinì'ny sivy taona latsaka.
Rafitra iray ataon'ny anjerimanontolo hakàna angovo miainga avy amin'ny tany
Anjerimantolo Amerikanina ao Azia Afovoany, ilay trano fonenana vaovao miaro ny tontolo manodidina, tahirin-tsary AUCA. Nampiasaina nahazoana alalàna
Ny Anjerimanontolo Amerikanina ao Azia Afovoany izay nanokatra ireo varavaran'ny tranony tamin'ny taona 2015 ho an'ny trano vaovao fonenan'ny mpianany, no sekoly tsy miankina voalohany indrindra ny fanafanàna rano avy any ambanin'ny tany tao amin'ny faritra..
Natao tsinontsinona tao Kyrgyzstan sy Azia Afovoany amin'ny ankapobeny ny tombontsoa azo avy amin'ny fomba fampiasana ny fanafanàna rano avy any ambanin'ny tany, izay fantatra nandritra ny taona maro.
Tamin'ny taona lasa, nilaza  ny Sekreteram-panjakana Amerikàna, John Kerry, nandritra ny lanonana fanokafana ilay trano fonenana vaovao hoe:
Miavaka ity trano fonenana vaovao ity satria izy no tetikasam-panorenana tsy miankina voalohany aty Azia Afovoany rakotra zavamaitso daholo izay rehetra aleha – izay midika fa misy famanàna rano avy any anaty tany sy fampangatsiatsiahana, fanarian-drano manaraka ny fandrasoan'ny teknolojia, ireo fomba fitarihan-drano, sy ny fenitra avo amin'ny fampiasàna mahomby ny angovo ato amin'ny faritra manontolo.
Amin'ny teny tsotra, misy paompy manakalo ny hafanana misy ao anaty tranobe sy ny tany. Mandritra ireo volana mangatsiaka, ampiasain'io ny hafanana voatroka avy ao amin'ny tany ary afindrany ho ao anati'ilay tranobe. Ho an'ny fampangatsiahana indray, ny mifanohitra amin'izay no alehany: mitroka ny hafanan'ny tranobe ary mandefa izany ao anaty tany mba ho ampangatsiahana.
Ny fanafanàna mahomby avy ao anaty tany sy ny hamoran'ny fikojakojàna dia mahatonga azy io hahasarika eo amin'ny lafiny toekarena. Manantena ny hampihena ny fandaniana angovo hatramin'ny 87% miandalana ny anjerimanontolo, ho fanamarinana ny fampiasam-bola voalohany lafobe tamin'ny paompy.
Ankehitriny, io no sandan'ny tsimoka orinasa kely amin'ireo karazana tetikasa tahàka izany, ampifanarahana amin'ny lova navelan'ny Sovietika momba ny famatsiana herinaratra, izay mahakivy ireo mpandraharaha ao amin'ny firenena tsy hizotra amin'ny làlana fanaovana izany.
Nefa na izany aza, miaraka amin'ny rafitry ny angovo tamin'ny vanim-potoana Sovietika izay hita maso ho mihadrodroka, toa voatokana ho faritan'ireo vahaolana mahaleotena mankany amin'ireo tsy fahombiazan'ny fiahiana azy ny hoavin'ny herinaratr'i Kyrgyzstan.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/04/80219/
 tsy fahampiana angovo: https://globalvoices.org/2014/09/09/will-kyrgyzstans-winter-be-a-blackout-again/